‘प्रदेश र संघले लगानी नगरी वीरेन्द्रनगर बन्दैन’ – Sajha Bisaunee
‘प्रदेश र संघले लगानी नगरी वीरेन्द्रनगर बन्दैन’
उप–प्रमुख एवम् कार्यवाहक प्रमुख:- मोहनमाया ढकाल
स्थानीय सरकार गठन भएको तीन वर्ष बितिसकेको छ । तर यो अवधिमा नागरिकको अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ । प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका पनि यस्तो आलोचनाबाट मुक्त छैन । देखिने गरी विकास–निर्माणका काम भएका छैनन् । पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको महामारीले धेरै काम प्रभावित भए । जसका कारण पनि गर्नैपर्ने काम गर्न नसकिएको जिकिर जनप्रतिनिधिहरूको छ । वीरेन्द्रनगरले हालसम्म गरेका काम, उपलब्धि, नागरिकका अपेक्षा, नगरका आगामी योजना र कोरोना संक्रण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भइरहेका कामका बारेमा हाम्रा सहकर्मी सीता वलीले वीरेन्द्रनगरका उप–प्रमुख एवम् कार्यवाहक प्रमुख मोहनमाया ढकालसँग गरेको कुराकानी:
उप–प्रमुखकै रूपमा मेरा थुप्रै जिम्मेवारी थिए । पछिल्लो ६ महिनादेखि कार्यवाहक प्रमुखको जिम्मेवारी पनि सम्हालीरहेकी छु । त्यसमाथि यो जिम्मेवारी मैले यस्तो समयमा पाएँ, जतिबेला कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीले विश्वलाई नै त्रसित बनाइरहेको थियो । नेपालमा पनि यसको असर देखिन थालेको थियो । यसकारण पनि दुवै जिम्मेवारी एकै पटक बहन गर्नु चुनौतिपूर्ण थियो नै । महामारीकाबीच मैले नगरको कार्यवाहक प्रमुख र उप–प्रमुख दुवै जिम्मेवारी लिनुपर्ने भयो । नगरपालिकाले गर्नुपर्ने नियमित काम त थियो नै, त्यसमाथि कोरोना भाइरसको महामारीसँग जुध्नुपर्ने चुनौति थपियो । वीरेन्द्रनगर अरुजस्तै एउटा नगरपालिका मात्र नभएर प्रदेशको राजधानी पनि हो । प्रदेशको केन्द्र हो । अन्य जिल्लाहरूसँगको सम्बन्ध जोडिएको छ । त्यसकारण पनि नगर र नगरबासीलाई कोरोना महामारीबाट जोगाउनुपर्ने त थियो नै यहाँबाट अन्यत्र समेत संक्रमण फैलिन नदिन थप मेहेनत गर्नुपर्ने दायित्व थियो ।
तीन वर्ष बिताइसक्दासम्म तपार्इंहरूले नगरको विकासका प्रशस्त सम्भावना रहेको मात्रै आंैल्याउनु भयो । तर, सोही अनुसार काम गर्न सक्नुभएन भन्ने नगरबासीको गुनासो छ नि ?
नगरबासीको अपेक्षा र नगरको आवश्यकता अनुसार काम गर्न नसकेको स्वीकार्नु हुन्छ ?
वीरेन्द्रनगर कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा छ । समुदायस्तरमा संक्रमण व्यापक भइसकेको अवस्थामा रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि के गर्दै हुनुहुन्छ ?
हामीले नगरका सबै वडाहरूमा कोरोना संक्रमण व्यवस्थापन समिति गठनको तयारी गरेका छौं । हरेक टोल विकास संस्थालाई टोलको सुरक्षाको जिम्मेवारी दिने तयारी समेत गरेका छौं । टोलमा कोही नयाँ मान्छे प्रवेश गरेको, भिडभाड गरेको र क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसनमा बसेको व्यक्तिको समेत निगरानीको जिम्मा टोल विकास संस्थाले जिम्मा लियो भने रोग नियन्त्रणमा सहज हुन्छ । ‘म गर्छु मेरो टोलको सुरक्षा’ भन्ने नाराका साथ वीरेन्द्रनगरका टोल–टोलका युवाहरूलाई कोरोना नियन्त्रणमा सहयोग गरी कोरोनामुक्त नगर बनाउन अनुरोधसमेत गर्न चाहन्छु ।
प्रकाशित मितिः १८ भाद्र २०७७, बिहीबार ०७:५९